Mudaneyaasha Wakiillada oo Doodo ka yeeshay Xeerar Xaasaasi ah oo ku jira Ajandaha Kalfadhigooda 28aad | Saxil News Network
Mudaneyaasha Wakiillada oo Doodo ka yeeshay Xeerar Xaasaasi ah oo ku jira Ajandaha Kalfadhigooda 28aad
Hargaysa (Saxil News.com)-“Guddoomiyuhuna aadbuu u sugayaa (Xeerka) oo wuxuu doonayaa inuu Xisbiga yar giigiijiyo, markaa aynu odayga si wanaagsan u sii macasalaamayno…..” – Xil. Cali-Mareexaan
“Dad Islaam ah ayaynu nahay oo dhaqan leh, qoladiina shuruucda waxaan idin weydiinayaa xaggee ugu soo darteen oo ka keenteen Xeerka Kufsiga iyo Jinsiga…” – Xildhibaan Dhakool
“Waar miyeynu Kitaabka Isticmaalnaa, sownaga Distoorka Samaysannay, haddii Kitaabka iyo shareecada lagu dhaqmayo, maan keeneen Xeer, laakiin Distoor…” Xil. Siciid Cilmi Rooble
Hargeysa, 11 August, 2015 (Himilo)- Mudaneyaasha Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa fadhigoodii shalay dood adag ka jira Ajandaha Kalfadhiga 28aad ee golahaas oo maalintii Sabti ee todobaadkan furmay, waxaanay mudaneyaasha halkaas fekerkooda kaga dhiibteen Xeer ka mid ah Ajandaha kalfadhiga qaarkood dood xaasaasi ah ka dhex-abuureen mudaneyaasha.
Fadhiga shalay ee Golaha oo uu Shir-guuddoominayey Guddoomiyaha Golahaas Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), waxa Xeerarka ku jira Ajandaha Kalfadhiga 28aad ee mudaneyaasha Golaha Wakiillada sida adag doodahooda uga dhiibteen, ayaa waxa ka mid ah Xeerka Doorashada Golaha Wakiillada oo qayb ka ah khilaafka siyaasadeed ka taagan doorashooyinka dalka.
Xildhibaan Cali Xasan Maxamed (Cali-Mareexaan) iyo Xildhibaan Baar Siciid Faarax, ayaa ka mid ahaa mudaneyaal sida adag uga dooday Xeerka Doorashada Golaha Wakiillada, waxaanay soo jeediyeen in la meelmariyo Xeerkaas si doorashooyinku uga qabsoomaan dalka.
“Xeerka in badan baa laga sugayey Golaha Wakiillada oo lagu eedaynayey, innaguna xukuumadda ayeynu ka sugaynay, maadaama oo xukuumaddii keeni-weyday, innaguna Ajandaha ku soo darsannay, xeerkanuna waa xeer jira, laakiin laba qodob uunbaa is-beddelaya, labadaas qodob iyo wixii kale ee isbeddelaya, waxaan leeyahay halaga beddelo. Laakiin meesha waynu ku raagnaye, doorashada hala qabto ayaan soo jeedin lahaa,” Sidaa waxa tidhi Xildhibaan Baar Siciid Faarax.
Mudane Cali Xasan Maxamed ayaa sheegay inay gole ahaan dhaliil aan la dafiri karin ku leeyihiin inaanay Gole ahaan diyaarin xeerkii lagu dooran lahaa mudaneyaasha beddelaya maadaama oo ay muddo toban sanno iyo dheeraad ah kuraasta ku fadhiyeen.
“Goluhu toban sanno ayuu fadhiyey, xeerkanna waxa la ansixiyey toban sanno ka hor, intaana golaheennu wuu shaqaynayey, waynu ku dhaliilannahay xeerkaasi inaanu wali innaga soo bixin. Waliba iyadoo laba jeer laynoo kordhiyey oo aynu shan sanno oo dheeraad ah ku fadhinno, immikana ay ku shaqaynayno korodhsiimadii saddexaad, in haddana xeerkii aanu jirin wali, waa dhaliil kale,” Sidaas ayuu yidhi Xildhinaan Cali-Mareexaan.
Isagoo hadalkiisa sii watay, waxa uu hadal kaftan siyaasadeed xambaarsan ku tuuray Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ah hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI, waxaanu xildhibaan Cali-Mareexaan yidhi, “Guddoomiyuhuna aadbuu u sugayaa (Xeerka) isaga laftiisu oo wuxuu doonayaa inuu Xisbiga yar giigiijiyo oo hawlihiisa u madax-bannaanaado, markaa isagana aynu sii tabaabushayno oo xeerka la habayno, dabadeedna aynu odayga si wanaagsan u sii macasalaamayno.”
Sidoo kale, waxa ay mudaneyaasha Golaha Wakiilladu si adag uga doodeen Xeer lagu magacaabay ‘Xeerka Kufsiga iyo Jinsiga’ oo eray-bixintiisu dood adag ka dhex-dhalisay mudaneyaasha Golahaas oo qaarkood ku tilmaameen xeer aan munaasibad ku ahayn dhaqanka iyo Diinta Suubban.
Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo mudaneyaasha dooddooda ka dhiibtay xeerkan ka mid ahaa, ayaa saluug ka muujiyey Xeerka iyo eray-bixinta uu wato, isagoo ku dooday inaanu ku habboonayn, liddina ku yahay Dhaqanka iyo Diinta Suubban.
“Dad Islaam ah ayaynu nahay oo dhaqan leh, qoladiina shuruucda waxaan idin weydiinayaa xaggee ugu soo darteen oo ka keenteen Xeerka Kufsiga iyo Jinsiga. Xukuumad iyo garsoor baynu leenahay, haddii wax la kursado, ciqaab iyo dambiga hab loo oogo ayay leedahay. Markaa Maxaa Jinsiga looga jeedaa? Waxaan aaminsanahay oo leeyahay xeerkaasi inooma mudna,” ayuu yidhi Xildhibaan Dhakool.
Doodda Xildhibaan Dhakool ka dhiibtay Xeerka lagu magacaabay Xeerka Kufsiga iyo Jinsiga oo ku jira Ajandaha Kalfadhiga 28aad ee Golaha Wakiillada, waxa jawaab ka bixiyey Guddoomiyaha Guddiga Shuruuda ee Golaha Wakiillada Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble.
“Haddaanu nahay Guddiga Shuruucda, lixda gobolba waanu soo marnay, lixda gobolba kufsi baa ka dhacay. Ninkii (Xildhibaan Dhakool) shareecada ka hadlayey, waar miyeynu Kitaabka Isticmaalnaa, sowniga Distoorka Samaysannay, haddii Kitaabka iyo shareecada lagu dhaqmayo, maan keeneen xeer, laakiin Distoor aynu taataabanay baynu ku dhaqmaynaaye, dee umadda Xeer u samee. Hablihii waa la kursaday, waliba wadareedbaa loo kursaday, markaa Jinsi waxa looga jeedaa Lab iyo Dheddig.” Sidaas ayuu yidhi Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble.
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble waxa kale oo uu dooddiisa kaga qayb-qaatay isagoo soo jeediyey inay Gole ahaan masuuliyadi ka saaran tahay samaynta Xeerkii lagu soo dooranayey Golaha Guurtida, waxaanu yidhi, “Xeerkii Guurtida waa loo baahan yahay, innagaannu waajibaadkeenna ka mid yahay, innagu (Wakiillada) toban baynu maraynayaa, iyagu (Guurtida) soddon bay marayaan.”
Xeerka Doorashada ee Golaha Wakiillada oo ansixiyey horaantii sannadkii 2005-tii oo ku beegnayd markii la doortay Golaha xilligan jooga, ayaa loogu talo-galay inuu ahaado xeer ku-meel-gaadh ah inta la samaynayo xeer Cusub, maadaama oo gobollada dalka qaarkood saluug ka muujiyeen saami-qaybsiga kuraasida ay ka helayaan Baarlamaanka. Balse Golaha Wakiilladu kuma guulaysan inay curiyaan Xeer Cusub oo beddel u noqda xeerkaas muddo 10 sanno ah oo ay kuraasida ku fadhiyeen, iyadoo tiraba laba jeer muddo-kordhin loo sameeyey, waxaanay taasi kalliftay inay dib boodhka uga tumaan wax-ka-beddelna ku sameeyaan Xeerkaas hore oo xukuumadda madaxweyne Siilaanyo dib-u-dhacyada ku yimi meelmarintiisa ku sheegtay caqabadda ugu weyn ee hortaagan qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo Golaha Wakiillada, kaddib markii xeerkani tiraba dhowr jeer dib uga dhacay Ajandeyaasha Kalfadhiyada Golaha.
Dhinaca kale, waxa ansixinta Xeerkan ka biyo-diiday mudaneyaasha Golaha Wakiillada ugu jira gobollada Awdal/Selal oo sheegay inaanay oggolaanayn ansixinta xeerkaas oo ay ku tilmaameen inuu duudsiyayo saami-qaybsiga gobolladaasi ka helayaan kuraasida Golaha Wakiillada.
Mudaneyaasha Golaha Wakiillada ayaa maanta u ballansan inay gudo-galaan ansixinta Ajandaha Kalfadhigooda 28aad oo ay ku jiraan Xeerar muhiim ah.
Maxamed Xasan Adan (FaradeerO)